Archive du 19-juil-2021
Mpanohitra Samy miady ho lohany !
Miova toa mizara roa ny endrika isehoan’ny fanoherana eto Madagasikara, taorian’ny fivorian’ny Vondrona PANORAMA tetsy amin’ny Foiben’ny HVM teny Andraharo ny sabotsy lasa teo.
Ady tsy mety tafainga
Tsy ny resaka nosy Malagasy fotsiny kay moa no ady tsy mety tafainga eto amin’ity firenena ity raha tena hiresaka izany atao hoe ambo-po sy fiandrianam-pirenena izany marina.
Hatramin’izay nisian’ny Covid 19 Nitombo 50% ireo olona tratry ny aretina alzeihmer
Nitombo 50% ireo olona lasibatry ny aretina Alzeihmer teto amintsika tato anatin’ny 2 taona, hatramin’ny nisian’ny valan’aretina Covid 19.
CFP ALTHERA Miarinarivo Nankasitraka ny Antoko Tia Tanindrazana
Naneho am-pifaliana ny fisaorana avy amin’izy ireo ny Mpitantana ao amin’ny CFP ALTHERA «Service-Info» ao Miarinarivo tarihin’ny Tale Atoa Ranarison Therre Alphonse,
Antsongo Antsirabe I Nanitsaka ary nahafaty olona ilay fiara mpitatitra fasika
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahatsiravina tany amin’ny tananan’Antsongo, kaominina Antsirabe I Faritr’i Vakinankaratra ny Sabotsy lasa teo.
Hetsika tany France sy La Réunion « Miala Rajoelina, Miala ny jadona »
Raikitra ny hetsika sy fanehoan-kevitra tsy ankitsitsy nataon’ireo Malagasy mpila ravinahitra any Frantsa sy La Réunion, tsy mankasitraka ny Fanjakana Rajoelina.
Coronavirus telo andro 6 maty, 57 ny tranga vaovao
3 no maty tao anatin'ny telo andron'ny 15,16,17 jolay teo, ka nampikatra ny isan'ny lavo hatrizay ho 941. Ny 2 ny alakamisy teo ary 1 kosa omaly.
Efa IRD ny rafitra rehetra Tsy afa-miala bala sy manilika intsony
Tsy afaka miala bala intsony, tsy afaka manilika intsony amin’ny hafa ny Fitondram-panjakana Rajoelina. IRD daholo miainga any amin’ny fokontany, kaominina, distrika, governora, depiote, loholona, governemanta, HCC,…
Fahasahiranana noho ny valanaretina Tsy misy mangirana hatramin’izao ilay fanampiana ny orinasa
Miatrika olana goavana ny tontolon’ny asa eto Madagasikara ankehitriny, hoy ny avy eo anivon’ny FISEMA nasionaly na firaisankinan’ny sendika Malagasy, sampana nasionaly.